Uzishaya isifuba obeyiMeneja kaMasipala uNongoma – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Uzishaya isifuba obeyiMeneja kaMasipala uNongoma
Uzishaya isifuba obeyiMeneja kaMasipala uNongoma
UMnu uBonga Ntanzi
Uyaziqhenya ngomsebenzi ashiye esewenzile kwaNongoma, ngokukhuculula inkohlakalo ebiyenziwa udede nephazamise intuthuko yomphakathi. UMnu uBonga Ntanzi kulindeleke ukuba azibeke phansi izintambo ekupheleni kukaMandulo ngemuva kweminyaka emihlanu ephethe. Ufike kwaNongoma ngowezi-2012 esuka eBaqulusini okuyilapho ebephethe khona isikhundla esifanayo.
“Ngifike konakele kakhulu kwaNgongoma kangangokuthi kunezinhlelo zentuthuko okwakudliwe imali yazo ekubeni zingazange zenzeke. Okwakuxaka ukuthi emabhukwini kaMasipala kwakuvela ukuthi zenziwe zaqedwa ekubeni kungenjalo. Bekukhona nezikhulu ebeziqashwe ezikhundleni ekubeni zingenalwazi lomsebenzi ebezinikezwe wona. Abasebenzi bebezenzela bekhwabanisa imali kaMasipala, bebhala amahora awumgunyathi engeziwe okusebenza ukuze bakhokhelwe ngaphezu kwemiholo yabo. Okubuhlungu ukuthi bekudlalwa ngemali yoMkhandlu engekho ngoba phela kuyaziwa ukuthi lo Masipala awukwazi ukuzenzela imali, kunalokho uncike ezimalini zesibonelelo ezivela kuHulumeni omkhulu,” kusho uNtanzi. Amanye amahlazo awavundulule efika, uthi kugcine sekungenelela kuwo owayenguNgqongqoshe Wezimali esifundazweni, uNkk u-Ina Cronje wamisa zonke izinhlelo okwakwebiwe ngazo imali yomphakathi. Phakathi kwalezi zinhlelo uNtanzi ubala ukukhishwa kwezigidi zemali okwathiwa yakhe isikhungo sokugcina amagugu kodwa okwatholakala ukuthi asikaze sakhiwe.
Kuphinde kube irenki yamatekisi okwadliwa imali yayo ekubeni ingakhiwanga. Akugcinanga lapho kodwa kwaba amahholo omphakathi ayengekho esimeni semali eyayikhokhwe uMkhandlu, umgwaqo okwakuhloswe ngawo ukunciphisa isiminyaminya esivamise ukukhungatha idolobha lakwaNongoma, nakhona kwadliwa imali yawo. Uma echaza uNtanzi uthi wabe eseqasha uMnu u-Archie Duma njengozobhekela uphenyo lwangaphakathi kuMasipala. UNtanzi uthi indlela isimo esasesinzima ngayo, kwasekuphele ngisho imali yokuholela abasebenzi ngenxa yenkohlakalo eyayenzeka udede.
“Ngabe sengiqala ngilungisa izinto ngibambisene nethimba lami ebelikhuthele ngendlela eyisimanga. Ngavala indaba yabantu abasebenza amahora engeziwe ngendlela engaqondakali. Kulokho ngenza isiqiniseko sokuthi sithola ungoti ozosicubungulela imisebenzi yethu ukuthi uma kudingeka amahora engeziwe kusho ukuthi lowo msebenzi ufanelwe ukwenziwa isikhathi esingakanani. Okunye ngavala ukutetemuka kwabasebenzi abebevele bethi angisayine bayahamba baya emhlanganweni kaHulumeni eMgungundlovu noma eThekwini. Ngaphinde ngacela uMkhandlu ukuba uvume ukuba lezi zinhlelo zentuthuko ebezimisiwe ngenxa yenkohlakalo ziqhubeke ngoba sekungasidla imali enkulu ukuba ziyekwe unomphela,” kuqhuba uNtanzi.
Uthe ngenxa yalokhu irenki yamatekisi, amahholo omphakathi nokunye kugcine kwakhiwe nomgwaqo.
Nokho konke lokhu akwenzekanga ngaphandle kokuchitheka kwegazi nokumiswa kwezinye izikhulu kwabakhona nababoshwayo. Ngemuva kophenyo olwalujutshwe ngaphakathi, kwathi ngemuva kokhetho loHulumeni Basekhaya, obelungoNcwaba, kwadutshulwa uDuma phambi kwabasebenzi bakaMasipala bebuka. UDuma kwakulindelwe ukuba adedele umbiko wenkohlakalo owawuthinta izikhulu ezithile eMkhandlwini, ezazinukwa ngenkohlakalo.
Omunye wabasebenzi bethimba likaDuma, wavele wasula emsebenzini ngenxa yokwesaba. Kuthe ekuqaleni kwalo nyaka, kwamiswa izikhulu ezazinukwa ngenkohlakalo kwathi esinye saboshwa ngezinsolo zokuthengela uDuma izinkabi. “Okubuhlungu kakhulu ukuthi uDuma wayelandwe yimi qobo ukuba azokwelekelela ekutheni silwe nenkohlakalo njengoba egcine ebulawa ngale ndlela. Nokho ngiyaziqhenya ngomsebenzi esiwenzile sibambisene nalo lonke ithimba langaphakathi,” kusho UNtanzi.
Ngenxa yale mizamo yokulwa nenkohlakalo, uNtanzi uthi uMasipala ukwazile ukuthi ngonyaka wonge imali eyizigidi ezintathu, okuyinto ebingaziwa kwaNongoma. Lo Mkhandlu ubulokhu uthola imibiko emibi kuMcwaningimabhuku kodwa uNtanzi uthi kule minyaka emihlanu izinto ziguqukile wakwazi ukuthi uMkhandlu uthole imibiko encomekayo.
Isibikezelo ngehhotela kwaNongoma siyazihlonza